Hawaii COVID Kunze Kwekutonga & Met neRekodhi Tourism & Silence
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii COVID Kunze Kwekutonga & Met neRekodhi Tourism & Silence
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Misa ndege kuti utange nendege itsva dzinoenda kuHawaii
Hawaii Tourism ine dambudziko rehutano hapana munhu anoda kukurukura. Vashanyi vanouya muhuwandu hwehuwandu vari kuunza mari inodiwa-zhinji kuhurumende, saka zvinoita kunge dambudziko rehutano iri harisi rekushandura zvinhu. Kugamuchirwa kune anorwara zvakanyanya Aloha Hurumende. Ngatitarisirei kuti vese vashanyi vakabaiwa jekiseni. Vafambi kuenda kuHawaii, batisisa uye gadzirira rwendo rwekushanya kwehutano kwehupenyu hwese.
Gavhuna weHawaii Ige anoramba kupindura eTurboNews and Hawaii Nhau Pamhepo.
Meya we Honolulu Rick Blangiardi akanyarara, achizviparadzanisa nemibvunzo isina kugadzikana na eTurboNews.
Hawaii Tourism Authority CEO John De Fries neHawaii Lodging uye Tourism Association CEO Mufi Hannemann vanga vachidzivirira mibvunzo kubvira COVID-19 ikava nyaya yeindasitiri yevaenzi yeHawaii.
COVID-19 iri kunze kwekutonga muHawaii, asi kushanya kunoenda pamwe nekuyerera. Vatungamiriri vezvekushanya havana chekutaura kuvashanyi. Vashanyi vakadaro vanofanirwa kunge vachinetseka zvakanyanya nezuva. Kunetseka uku kunosangana nerunyararo neavo vaive vasarudzwa kuti vatungamire.
Kunyarara mhinduro yekuponesa kumeso inozivikanwa mutsika dzeAsia, zvinoreva kuti PR bhizinesi rakajairwa muHawaii.
Mazuva matanhatu apfuura, chinyorwa ichi yakashuma iyo rekodhi nhamba yakambonyorwa yeCOVID-19 kesi muHawaii. Iyi nhamba ikozvino kuwedzera kwechipiri, uye rekodhi nyowani nhasi zvinoreva kumwe kukunda kwehutachiona.
Tichifunga nezve 53.7% yevagari muHawaii ikozvino vabaiwa zvakakwana, uye 71.7% yakagashira kanokwana kamwe pfuti yePfizer kana Moderna, hutachiona hutsva hunotonyanya kutyisa nekuti vanenge vese vari pakati pe46.3% vasati vabaiwa zvizere vanhu. Kunyangwe panguva yakaipisisa yedenda, huwandu hwakadai hauna kuoneka mudunhu.
Kunyangwe pakave nekushanya pamwe nehupfumi hwakamira pamberi paGumiguru 15 gore rapfuura, huwandu hwehutachiona hwakadai hwakanga husiri padhuze neizvo zviri kusangana neHawaii izvozvi.
Mumwe anogona kupokana chete nyaya sere dzinogona kuverengerwa kufamba nezuro, asi izvo zvisina kutaurwa ndezvekuti 8 chete kesi dzinogona kuve nekubatana nekupararira kwenharaunda, asi mazana emamwe kesi, zvichiita ruzhinji rwematambudziko ese ane chikonzero chisingazivikanwe.
Sezvo zvave zviri munguva yese yedambudziko, iyo Hawaii Tourism Chiremera chinyararire, uye zvino runyararo urwu rwunotsigirwa naGavhuna Ige, maMeya, nevamwe vese vari pamusoro.
Pedyo nevanosvika makumi matatu vevashanyi vari kusvika muHawaii zuva rega rega, maresitorendi akavhurika, masiki uye kuremara munharaunda zvinoita sekukosha.
Zvinoshamisa kuti, mumwe anogona kuti hupfumi hwakatungamira pamusoro pehutano, asi iyo Hawaii Tourism Authority yanga iri mubishi kutsvaga nzira dzekuodza moyo kushanya kwakawanda.
Chikonzero cheicho hachisi COVID-19 asi kuchengetedzwa kwenyaya dzetsika uye shanduko yemamiriro ekunze.
Mune ichangoburwa COVID-19 kesi dzinoshuma kubva kuHurumende ye Aloha State, 655 nyowani dzeHawaii COVID-19 kesi dzinounza iyo yakazara kusvika ku44,617 1.4 (kumusoro XNUMX% kubva pazuva rapfuura). Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yezviitiko zvakanyorwa muzuva rimwe chete.
Sekureva kwa Lt. Gov. Josh Green, uku kuwedzera kuri kukonzerwa neiyo Delta Variant. Semhedzisiro, zvipatara zviri kukura pamwe nanhasi kuwana 166 ichirapwa muchipatara, chiyero che 6.89%.
Parizvino, 1,883,809 COVID-19 bvunzo dzaitwa pamwe ne42,439 zvichikonzera kuverenga kwakanaka uye kumaka positivity mwero nhasi pa6.9%.
Parizvino, avhareji kesi yezuva nezuva iri 437.6. Pakanga paine huwandu hwezviuru makumi mana nemakumi matatu ane mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu zvakataurwa mumazuva gumi nemana apfuura. Hwevanhu vakafa kusvika pari zvino vari 4,391 (14%).
Kuparara kwezviitiko zvemazuva ano ndezvi:
Dunhu reHawaii: 131
Dunhu reMaui: 69
Kauai County: 7
Parizvino pasi rese rakarongeka. Mahombekombe, mahotera, uye nendege zvakazara. Vashanyi havawanzoonekwa vakapfeka masiki uye vari kuva nenguva yakanaka pamhenderekedzo, mumaresitorendi, mudziva, makirabhu ehusiku, uye zvinokwezva.
Chero ani anogara mudunhu reWaikiki anonzwa ma sireni eamburenzi izvozvi anogara ari 24/7, mibhedha yezvipatara iri kuzadza, asi nekuda kwenhamba yakawanda yevanhu vakabayiwa jekiseni, mwero wekufa, nerombo rakanaka, unoramba wakadzikira.
Pachave nechero zvirambidzo mupombi? Kwete, sezviri kuratidzwa naGavhuna Ige.
Nyamavhuvhu 11, 2021 pa09: 30
Vanhu zana negumi nevapfumbamwe pachiwi chihombe vane furuwenza… hazviite kunge chimbichimbi kwandiri. Vazhinji vachapora vega uye vanozoenderera nehupenyu hwavo sezvatinofanira isu tese. Hapasisina kuvhara, mask kana kushamwaridzana munharaunda kunodiwa - tanga tiri kune vanopfuura gore uye havashande.
Nyamavhuvhu 6, 2021 pa17: 44
Maybi wakazara marara urikufambisa zvisirizvo ini ndinogara muBig Island uye ndakarasikirwa nevanhu 4 kuti covid ndiudze kuti zvinonyepa sei apo vanhu vari kubatwa zuva nezuva pamitengo yepamusoro mumwe benzi asina kupfeka mamask avo benzi harisi kusarudza kubayiwa nhomba pamwero uyu tichave tichivhara zvakare nekuda kwemapenzi akaita sekuparadzira mashoko asiri iwo
Juergen T Steinmetz anoti:
Nyamavhuvhu 6, 2021 pa01: 04
Chitsuwa Chikuru chaive nekuwedzera kwechipiri kukuru nhasi, asi ndinobvuma nzvimbo dzakavhurika - kwete saWaikiki kana Oahu zvakajairika.